मन्त्री राई र धम्बोझीवासी बीच छलफल – Sadarline
हिरमिनियालाई गाउपालिकामा राख्न दोस्रो चरणको आन्दोलन
नेपालगञ्ज : शहरी विकास मन्त्री मो. इस्तियाक राईले बिहिवार विहान नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का बासिन्दासँग छलफल गरेका छन् । वडावासीले मन्त्री राईको स्वागत र सम्मान समेत गरेको थिए । वडा नम्बर १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालको पहलमा भएको छलफलमा धम्बोझीवासीले विकास निर्माणको माग गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष रिजालले शहरी विकास मन्त्री राईले धम्बोझीको विकास निर्माणमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण भएको बताए । मन्त्री राईको अग्रसरतामा धम्बोझीमा बाईपास सडक र चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हुँदैछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८ वटा सडक, धम्बोझी माविको थप भवन र दोन्द्रा नालामा पक्की तटबन्धको माग गरिएको वडाध्यक्ष रिजालले बताए ।
सो अवसरमा मन्त्री राईले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मात्रै नभई जिल्लाको विकास निर्माणका लागि आफु प्रयासरत रहेको बताए । उनले नगर र जिल्लाको विकासका लागि आफुले कुनैपनि राजनीतिक पुर्वाग्रह नराखेको भन्दै विकासमा सहकार्य आवश्यक भएको बताए । धम्बोझीमा आफ्नो बाल्यकाल बितेको स्मरण गर्दै मन्त्री राईले धम्बोझी आफुलाई माया लाग्ने ठाउँ भएको जिकिर गरे । सो अवसरमा धम्बोझीमा सभागृहसहितको ब्याडमिण्टन कोर्ट निर्माणको समेत माग गरिएको छ ।
सदरलाइनडटकम, दाङ : आफूलाई जानकारी नदिई जिल्ला समन्वय समिति परिसरको भवन प्रयोग गरेको भन्दै समन्वय समिति दाङका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा रहेको भवन जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद गौतम र घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारबीच […]
१३ पुष २०७४, बिहीबार २१:३३
नेपालगन्ज एयरपोर्टमा पुर्व राजालाई यसरी गरीयो स्वागत
२३ भाद्र २०७५, शनिबार १५:००